Qarax lala eegtay gaari ciidan gudaha magaalada Boosaaso - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandQarax lala eegtay gaari ciidan gudaha magaalada Boosaaso
May 16, 2019 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Ciidamo ku sugan Boosaaso. [Sawir Hore]
Boosaaso-(Puntland Mirror) Qarax ayaa caawa fiidkii ka dhacay magaalada Boosaaso, sida ay sheegeen haayadaha ammaanka.
Qaraxa ayaa ahaa kan wadada dhinaceeda lagu aaso oo lala beegsaday gaari ay leeyihiin ciidamada ammaanka Puntland, mana jirto wax khasaare ah oo la soo sheegay, sida ilo-wareedyadu intaas ku dareen.
Cidina ma sheegan masuuliyada qaraxaas, balse maleeshiyooyinka Al-Shabaab iyo ISIS ayaa weeraro hore ka geystay magaalada Boosaaso, ee xarunta ganacsiga Puntland.
June 6, 2019 Madaxweyne ku xigeenka Puntland: Muuse Biixi cunaqabatayn ma saari karo gobolka Sanaag
Nairobi-(Puntland Mirror) Xoghayaha arrimaha dibada dalka Maraykanka John Kerry ayaa maanta oo Isniin ah magaalada Nairobi kula kulmay wasiirada arrimaha dibada ee wadamada Bariga Afrika. Kulanka ayaa looga hadlay sidii loosoo afjari lahaa xiisadaha dagaal ee [...]